M2 wuxuu soo galayaa soo-saarista soo socota ee MacBook Pro | Waxaan ka socdaa mac
M2 wuxuu galaa wax soo saar loogu talagalay kuwa soo socda ee MacBookga
Tani waa joogsi la'aan. Mashiinka weyn ee Apple ma istaagayo xitaa haddii aan weli ku dhex jirno masiibo caalami ah. Waxaan wali ogaaneynaa waxyaabaha yaabka leh ee processor-ka cusub ee Apple Silicon M1 uu na siinayo, iyo M2.
Waxay umuuqataa in soosaarka ballaaran ee jiilka labaad ee processor ARM ee loogu talagalay Macs uu bilaabmayo. Sidaa darteed bisha Luulyo mar hore ayaa la soo saari lahaa, waxayna diyaar u yihiin inay ku shiraan midka cusub MacBook Pro in la sii daayo deyrta. Marka haddii aad ka shakinayso seedigaaga xawaaraha barnaamijkaaga cusub ee MacBook Pro M1, taxaddar maxaa yeelay dhowr bilood gudahood wuxuu iibsan karaa midka ku qalabaysan M2 wuuna kaa waaban karaa. Maxaa dhar ah.
Sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay Nikkei Aasiya, jiilka xiga ee processor-ka Apple, oo loo yaqaan "M2", ayaa galay wajiga wax soo saarka. Khadadka wax soosaarka ee processor-yada noocan oo kale ah waa kuwo gaabis ah, marka bilaabidda wax soosaarka hadda waxay ka dhigan tahay in jajabku uu heli lahaa saad ballaaran oo la isugu geeyo bisha julio.
Tani waxay ka dhigan tahay in lagu soo dari doono moodellada cusub ee 'MacBook' ee bilaabaya deyrta, oo ay u badan tahay khadadka xiga ee dib loo rogay ee MacBook Pros, oo laga yaabo inuu arko iftiinka maalinta octubre ee sanadkan.
Qaab dhismeedka '1-core M8 chip' wuxuu bixiyaa waxqabad cajiib ah iyo nolol batari aan caadi ahayn, oo lagu muujiyey Apple Silicon MacBooks kii ugu horreeyay dayrtii la soo dhaafay. Apple wuxuu adeegsaday isla processor-kii lagu dhawaaqay iMac y iPad Pro. Si kastaba ha noqotee, jajabku wuxuu leeyahay xoogaa xaddidan oo adeegsadayaasha xirfadleyda ah ay filayaan in lagu hagaajiyo jiilka labaad.
M1 oo xoogaa ka gaaban dekedaha
Kuwani waa sawirrada isku-imaatinka ee 'MacBooks' cusub oo ay faafisay REvil.
Badanaa gaar ahaan, M1 chip wuxuu kaliya taageeraa ugu badnaan laba dekedood qaylo waxayna u oggolaaneysaa soo-saar shaashadeed oo keliya. Tusaale ahaan, xilligii dayrta Apple wuxuu sii daayay 13-inch oo laba-deked leh oo loo yaqaan 'Thunderbolt MacBook Pro' oo leh 'M1 chip', laakiin 4-dekedda 13-inch MacBook Pro oo leh processor Intel ayaa wali iib ah.
Sidoo kale, halka qalabka M1 uu si heer sare ah u bixiyo waxtarka tamarta iyo awoodda naxariis darrada ah, haddana kama sarreeyo Intel Macs-ka dhammaadka heerkulbeegyada oo dhan. Gaar ahaan, sawirada isku dhafan ee M1 chip ayaan ka fiicneyn kaararka sawirada ee u gaarka ah ee lagu soo daray iMacs-ka sare ama MacBook Pro.M1X«) Ku dar waxqabad badan oo CPU iyo GPU ah, basas badan oo Thunderbolt ah, oo u oggolow ugu yaraan laba bandhig oo dibadda ah.
Chip-ka M1 wuxuu ka kooban yahay processor-ka Qalabka 8 iyo 8-core GPU oo leh qaab dhismeedka RAM. Sanadkii la soo dhaafay, waxaa horeyba loogu xamanayay muuqaal suuragal ah M1 leh Qalabka 20 CPU-yada loogu talagalay MacBook-yada sare. Desktop Macs, iyada oo aan loo baahnayn processor noocan oo kale ah oo tamarta wax ku oolka ah leh, wuxuu yeelan karaa naqshado jilicsan Qalabka 32.
Warbixinta maanta, Nikkei waxay ku sheegtay in M2 uu sii wadi doono isdhexgalka CPU, GPU, iyo mashiinka neerfaha isla cufka. Si kastaba ha noqotee, kuma sii faahfaahin faahfaahinta qeexitaanka processor-ka cusub.
Apple waxaa lagu xantaa inay diyaarinayso moodooyin cusub oo ah 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro, oo leh qalabka ARM ee qaab cusub oo loo yaqaan 'chassis design', oo leh soo celinta MagSafe, akhristaha kaarka SD iyo dekedaha HDMI.
Waxaas oo dhami waxay noqdeen kuwa la ogyahay inay ku mahadsan yihiin shaandhaynta ee naqshadaha cusub ee MacBook Pro oo ay sameeyeen hagardaamada REvil. Haddii Apple ugu dambayntii bixin waayo lacag-diidka, waxa laga yaabaa inaan intaas ka sii ogaano. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » M2 wuxuu galaa wax soo saar loogu talagalay kuwa soo socda ee MacBookga
Zoom wuxuu ku darayaa shaqada aragtida miisaanka si loo abuuro shirar xiiso badan